Fihetseham-po mampidi-doza ny fanavakavahana ara-poko sy firenena. Noho izany, ny fiheverana diso momba ireo solontenan'ny firenena samihafa dia mitombo eto amin'izao tontolo izao.
Indraindray ny fiheveran-diso dia mifandray amin'ny toetra tsara, saingy amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia noforonina izy ireo mba hampietry ny olona, ​​hampihena ny lanjany ara-tsosialy, ara-kolontsaina ary ara-politika eo amin'ny fiarahamonina. Ary ny zavatra mahatsiravina indrindra dia ny manohy ny fisiany hatramin'izao. Ary manana andraikitra lehibe isika hisintonana fanambarana sandoka maro araka izay tratra, ary mamela ireo izay manaja ny maha-izy azy sy ny zava-bitany avy amin'ny foko sy firenena samihafa. Manolo-kevitra ny hanomboka amin'ny fianarana ny fomba fiasa mahazatra indrindra.
1. Asiana Clever
Heverina fa ny Aziatika rehetra - tena mahay mandanjalanja sy mahatalanjona amin'ny siansa marina. Tena azo antoka ny fepetra tsara, saingy misy ny tsy fahampiana. Ny olana dia avo be ny bar, fa ny solontenan'ny iray ihany no tsy mahay matematika, matematika, cybernetics na siansa hafa.
2. Angry Hispanics
Ny feon'ny fieritreretana tsy ara-drariny dia mahatonga izao tontolo izao hieritreritra fa ny vehivavy rehetra any Amerika Latina dia mafana loatra, feno fientanentanana na matoky tena.
3. Ny Rosiana rehetra dia voamariky ny solontenan'ny KGB
Ny solontenan'ny fiarahamonina hafa dia mbola mino fa ny Rosiana dia tsy afaka manao na inona na inona raha tsy misy ny fankatoavan'ny KGB.
4. Rano rano
Ny fijerin'ny stereotype, araka izany, ny Amerikanina rehetra dia mahasosotra ny fisotroan-toaka. Nandritra ny fotoana lava dia nampiasaina izy io mba hanamafisana ny tsy fahampian-tsak'ity hazakazaka ity, ary tsy nisy nieritreritra mihitsy aza fa ny tena marina dia tsy misy dikany io fitsarana io.
5. Dadatoa Tom
Ny niandohan'ny fijerena ny stereotype dia novolavolain'ny tantara nosoratan'i Harriet Beecher Stowe hoe "Dadatoa Tom's Cabin". Ny toetran'ny tena maina - lehilahy mainty hoditra - dia asehon'ny mpanompo mahatoky sy mpankato izay mahatsapa fa mahazo aina ao anatin'io toe-javatra io ary tsy misy dikany ny fikomiana. Ny sarin'i Dadatoa Tom dia nampiasaina be tany am-piandohan'ny asa Hollywood.
6. Dihy matevina
Nandritra ny taona maro, sarimihetsika sy fampisehoana amin'ny fahitalavitra dia nanery ny fiheverana fa ny vehivavy Arabo rehetra dia mandihy tanteraka ary mieritreritra ny tanjon'izy ireo hanodidina ny lehilahy amin'ny hatsaran-tarehy sy hanome fahafinaretana azy ireo.
7. Ny Mpanjakavahan'ny Fifanampiana
Ny takelaka dia nivoaka tamin'ny andron'i Ronald Reagan. Tamin'izany fotoana izany, maro no nino fa ny vehivavy afrikana amerikana dia nanararaotra ny fanampiana ara-tsosialy ary nanolo-tena hiditra amin'ny hosoka mba hahazoana izany.
8. Arabo dia mpampihorohoro
Aza mino izany, fa misy ireo olona mino fa ny Arabo rehetra dia mpampihorohoro. Ity fehezanteny ity dia ampiasain'ireo mpamorona sarimihetsika, lalao ordinatera. Matetika ny mpanao politika no nahatsiaro azy.
9. Jim Crowe
Ny mpanorina ny feon-kira dia i Thomas D. Rice, izay nanala ny endriny tamin'ny loko mainty ary nanao hira iray momba an'i Jim ilay Raven akaikiny. Ny anaram-bosotra hoe "Jim Crow" taorian'io dia niorina mafy tokoa taorian'ny solontenan'ny hazakazaka Afrikana-Amerikana.
10. Lady Dragon
Ny endri-tsoratra matetika dia hita ao amin'ny sarimihetsika. Araka ny voalazany, ny Asiana rehetra dia tena be sexy, nefa miaraka amin'ny hafahafa, midika sy mampidi-doza.
11. Camel Riders
Tahaka ny tsy handehanan'ny vehivavy Arabo mandihy an-dalamby, fa tsy ny lehilahy Arabo rehetra dia barbarians mandehandeha eny amin'ny rameva.
12. Nosoratan'ny Rosiana Rosiana - vodka
Eny, inoana fa ny vodka any Rosia dia mamoaka amin'ny diaper. Mazava ho azy fa matetika no miseho eo amin'ny latabatra rosiana ity alika ity, saingy tsy ny rehetra no mampiasa izany.
13. Kung Fuists malaza
Araka ny lazain'ny stereotype, tokony ho tsara tanteraka ny asam-piadiana rehetra any Azia.
14. Indian Princess
Ao amin'ny sarimihetsika maro, sariitatra, boky, misy mari-pamantarana fa ny vehivavy indiana rehetra dia mahery setra sy mpilalao mafimafy, mamahana ny fahalemena amin'ny lehilahy fotsy.
15. Siberiana mangatsiaka
Matetika dia gaga ny vahiny satria mangatsiaka ny Rosiana, mino fa mangatsiaka tsy tapaka ao amin'ny tanindrazany.
16. Jiosy tsara
Tsy manam-pahaizana io fehezan-teny io. Maro ny solontenan'ny Jiosy no mpanankarena sy mpanankarena. Fa toy ny firenena rehetra, ny Jiosy dia misy solontenan'ny firoboroboana samihafa.
17. Hazo mofomamy
Matetika dia mino fa ny Afrikana Afrikana dia tia ny akoho mafana ihany. Ny rehetra satria tamin'ny fotoan'ny fanandevozana dia nanome sakafo ny andevo irery ihany ny tompony tamin'ity sakafo ity. Ary ny sarimihetsika fanavakavaham-bolon-koditra "Ny Fahaterahan'ny Firenena" dia nanamafy ny mpihaino tamin'ny fahamendrehan'ity karazana stereotype ity.
Sarintany iray hafa momba ny Afrikana-amerikana sy ny sakafo. Rehefa lasa olona afaka, dia maro ny solontenan'io hazakazaka io no nanomboka nanamboatra fambolena, naniry sy nivarotra pastèques. Io taho io dia sariohatra tsy voafaritra mazava momba ny fahalalahana. Nalahelo ny fomba nanaparan'ireo andevo teo aloha ny soroka, nanapa-kevitra ny hanova ny zava-drehetra ny fotsy ary nanamboatra lakandrano ho mariky ny hakamoana, ny zazakely ary ny tsy fahamendrehan'ny mainty hoditra.
19. Tratra fotsy
Noho izany, ireo solontenan'ireo Amerikana ireo dia nanonona ireo olona fotsy hoditra rehetra tany atsimon'i Amerika, ka nihevitra azy ireo ho adala sy kamo, afa-tsy ny mijery ny hazakazaka sy ny labiera.
20. Ny mainty hoditra
Araka io fomba fijery io, ny mainty hoditra rehetra dia biby, olona tsy mitovy fananahana, manenjika ireo niharam-pahavoazana tsy misy mpiaro. Ity sehatra ity dia niorina taorian'ny ady amerikana Amerikana ary voatery nandresy lahatra ny vahoaka fa amin'ny alàlan'ny fanandevozana dia ho azo atao ny mitazona ireo lehilahy Afrikana-amerikana feno herisetra.
21. Patriarka an'ny Latinos
Mazava ho azy fa tsy ny lehilahy amerikanina latinina rehetra no mendri-piderana, mandiso fanantenana ary andian-jiolahy.
22. Vehivavy mainty ratsy
Ary ny Amerikanina Afrikana dia tsy natoky tena na oviana na oviana, manala baraka, mikiakiaka ary tsy mahalala fomba.
Ny "Redface" dia fanehoan-teny manivaivana izay manimba ny Indianina Amerikana, ny habe iray dia mifanaraka amin'ny rehetra. Raha samy nanana ny kolontsainy manokana, fiteny, fomban-drazana, akanjo avokoa ny foko tsirairay.
24. Mpifindra-monina avy any Amerika Latina - mpamono olona sy mpikomy
Fihetsiketsehana mampihetsi-po izay tsy manana porofo matanjaka, izay malaza amin'ny Donald Trump.
25. Ireo mainty hoditra
Iray amin'ireo tantara an-tendrony mampihetsi-po sy tsy miangatra izay mamaritra ny Amerikana Afrikana ho kamo, tahotra, adala, teraka hiaina amin'ny fanandevozana.
Shock: 25 sary, izay mampiseho zavatra tsy tokony hisy
35 fotoana mampihetsi-po, voasambotra teo amin'ny sary
Solontenan'ny karbaona 35, izay mety ho sefo na diagnosy!
Bitcoins dia nandao an'i Kardashian, saingy mbola tsy matoky azy ireo izahay: 6 antony tsy hampiasana vola amin'ny crypto
Ity sary ity dia mampiseho boribory 16, fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahita azy ireo!
Tantara an-tsary avy amin'ny fiainana ao amin'ny asan'i Ali Alamedi
Ny fanoloran-kevitra amin'ny hevitrao: fomba 20 izay hankasitrahan'ny Rosiana!
Ho an'ny olon-dehibe ihany: Disney Princesses dia zavatra mafana avy amin'ny Playboy!
"Tsy mitomany izy ireo satria tsy mitomany, fa mitomany", amin'ny molotry ny ankizy momba ny fitiavana
Lalao mahavariana misy aloky ny sarin'i Vincent Bal
Ahoana no hamaritra ny vohoka amin'ny saka?
Vitaingitra vita amin'ny glasa ho an'ny efitra fandroana
Gullash soup - recipe
Nanamarika ny fifandraisan'i Tara, 19 taona, i Henry Cavill, 32 taona
Monica Bellucci tsy misy sary
Ny akanjo marevaka amin'ny vehivavy
Sakafo ho an'ny vavony
Ahoana ny fomba fitsaboana arthrose amin'ny lohalika?
Nosy Seymour Avaratra
Sightseeing any Side, Torkia
Ny ririnina marevaka ny ririnina
Motherwort amin'ny fampinonoana
Mijoroa ho an-tsoratra
Zodak avy amin'ny alèjy
Midika hoe nesorina tapakila